Xisbiga Waddani Oo Xabsiga Hargeysa Ku Bookhday Odayaasha Reer Awdal, Farriinna U Diray Bulshada Awdal |
Xisbiga Waddani Oo Xabsiga Hargeysa Ku Bookhday Odayaasha Reer Awdal, Farriinna U Diray Bulshada Awdal
Berbera(GNN)Guddoomiye kuxigeenka xisbiga Waddani, ahna kusimaha guddoomiyaha iyo saraakiil sarsare oo xisbiga Waddani ah ayaa xabsiga Hargeysa ku bookhday odayaasha u xidhan weerarkii lagu qaaday guriga badhasaabka Awdal. Waxay sheegeen in xaaladda Odayaashu tahay mid fiican, marka laga reebo jugo ka soo gaadhay booliska markii la soo qabanayay.
“Aniga iyo wefti xisbiga ah oon hogaaminayaa waxaanu bookhanay odayaashii dhaqanka iyo waxgaradka loo soo xidhay shaqaaqadii gobolka Awdal ka dhacday. Runtii odayaashu xaalad fiican oo aad u wanaagsan ayay ku jireen, inkasta oo ay jeel ku jiraan haddana wax dhibaato ah oo ay ka cabanayaan noomay sheegin, jugtii ka soo gaadhay qab-qabashadii RRU-da mooyaane,” ayuu yidhi Axmed Muumin Seed.
Guddoomiye xigeenka Waddani oo ka soo jeeda gobolka Awdal wuxuu farriin u diray bulshada reer Awdal “ Waxaan bulshada reer Awdal leeyahay dalka Somaliland inagaa iska leh, Awdal waa halkii Somaliland laga aasaasay. Waa halkii qaranimada laga taagay. Waxaan leeyahay cidi dalkan inagama leh. Waxa muhiim ah inaynu nabad galyada ilaashano, inaynaan inamada dhalinyarteena ah waxaan calooshooda ku jirin aynaan galin. Nabadgalyado waa danteena, gobolku waa gobolkii horumarka, waa gobolkii waxbarashada, waad ogtihiin jaamacadda Camuud ardayda ku jirta ee geeska Africa oo dhan iskaga timaada ee ku soo hiranaysa nabadgalyada iyo wanaaga gobolku lahaa,” ayuu yidhi Mudane Seed.
Barkhad Jaamac Batuun, oo ka mid ah saraakiisha xisbiga Waddani ayaa isna sheegay in bulshada reer Awdal sharaf ku leeyihiin Somaliland, balse xukumaddu dhibaataynayso “Qaybaha bulshada Awdal oo runtii bulshada ku leh sharaf iyo karaamo, magac iyo muuqaal iyo miisaan ba dalka ku leh waxaan ku boorinayaa inay nabadgalyada ilaaliyaan, inaan qaranka bartooda looga soo dhicin. Waanu ka war qabnaa in gobolkan oo qalin ku suntan ay xukumaddan Xurmo daran doonayso inay qori dable sudho,” ayuu yidhi Mr Barkhad.
Midowga Afrika Oo War kasoo Saaray Dagaalkii Beled-Xaawo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Qaabiley Safiirka Dalka Denmark Amb. Ole…
Maxay Sacuudi Carabiya ka fileysaa madaxweyne Biden?